အကြောင်း – LVBANG
ရှင်ဟာမြန်မာ ကုမ္ပဏီသည် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ Green Gang ပက်တီးမှုန့်၊ Coating ပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အဦးအပူခံစနစ်များ၊ အသင့်အသုံးပြုနိုင်သော နံရံများ၊ လက်သုံးပစ္စည်းနှင့် လျပ်စစ်ပစ္စည်းများ အစရှိတို့ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ဟာ မြန်မာရဲ့ မျှော်မှန်းချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရည်သွေးမြင့်မားသော ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် – စိတ်ချ၊ အဆင်ပြေပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၏ ခက်ခဲမှုများကို လျှော့ချရန်
ပူးပေါင်းမှုပန်းတိုင် – လူနေမှုအဆင့်အတန်းအား ခေတ်မီ နည်းပညာ အသုံးပြု ပစ္စည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချသော ပတ်၀န်းကျင်တစ်ခုအား ဖန်တီးရန်
တန်ဖိုး – ဖောက်သည်များ၏ လုံခြုံရေးအတွက် တာ၀န်ယူခြင်း၊ ရိုးသားစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်း
လုပ်ငန်းအတွေးအခေါ် – ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက အူတိုင်မှာ လူသားအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းကိုစတင်တည်ထောက်စဥ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် လူသားအကျိုးပြုစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ဖောက်သည်များ၊ အကျိုးတူများ၊ ၀န်ထမ်းများသည် ကျွန်ုပ်အတွက် မိသားစုသဖွယ် အရမ်းပင် အရေးပါလှပါသည်။
စားသုံးသူ သည်သာ ပထမဆုံးဦးစားပေးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ယဥ်ကျေးမှုဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀န်ဆောင်မှုအရေအသွေး၊ စားသုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ ကိုက်ညီမှု တို့သာမက စားသုံးသူများ မျှော်မှန်းထားသည်ထက် သာလွန်အောင်အမြဲ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ဓာတ် – သမာဓိရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း၊ ထိရောက်မှုရှိခြင်း၊ တီထွန်ဖန်တီးခြင်း
အရည်အသွေး ဆိုင်ရာမူ၀ါဒ – အရည်အသွေး အဓိကထားခြင်း၊ တန်ဖိုးရှိသော စားသုံးသူများ ဖန်တီးခြင်း၊ စဥ်ဆက်မပြတ် ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်း စံသတ်မှတ်ချက် – မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်း၊ မှန်ကန်သည့် အရာများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပန်းတိုင် – တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသော စားသုံးသူများအာ မှန်ကန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များအစဥ်မြဲ ထောက်ပံ့ပေးမည့် ကတိက၀တ်။
© Xin He Myanmar 2019. All Rights Reserved. A glance of Zeagwat, Inc.